Famolavolana ny mailaka finday mavitrika vs. Martech Zone
Famolavolana ny mailaka finday mavitrika vs.
Zoma, Jona 21, 2013 Alarobia, Jona 19, 2013 Douglas Karr
Yesmail Interactive dia namoaka whitepaper mitondra ny lohateny hoe, Famolavolana mailaka finday — Marketing fit ho an'ny ScreenOpens madinidinika amina fikandrana vaovao, manambara maherin'ny 36 isan-jaton'ny mailaka dia sokafana amin'ny finday iray, izay vinavinaina hitohy hitombo isan-taona.
Rehefa manohy mitodika any amin'ny findain'izy ireo ny mpanjifa mba hanamarina ny mailaka dia zava-dehibe kokoa noho ny hatramin'izay ny fanaovan'ireo marika ny antso ho amin'ny hetsika mora harahina. Mampalahelo fa 76 isan-jaton'ny marika ihany no manome paikady finday fototra - na tsy manana iray mihitsy.
Manakana ny mpanjifa tsy hirotsaka amin'ny atin'ny marika na hanao fifanakalozana satria saika ny antsasak'izy ireo no milaza fa sarotra vakiana ny mailaka finday noho ny fikororohana be loatra ary ny 29 isan-jato dia manondro fandaminana tsy mety amin'ny findainy.
Mba hiantohana ny fifandraisan'ny mpanjifa amin'ny atiny, ny marika dia tokony hampiasa layout hybrid miaraka amina endrika mamaly sy azo ovaina. Ny tombony lehibe dia:
Sary famantarana lehibe kokoa ary ampifandraiso amin'ny tranokala.
Fikarohana lehibe kokoa ary noho izany ny tahan'ny tsindry
Fampitomboana ny fifantohana amin'ny atiny nasongadina
Lahatsoratra lehibe sy antso ho amin'ny hetsika
Ny fihanaky ny fandraisana an-tanana ny finday dia mitaky ny fanaovana antso an-tariby tsotra ny mpivarotra hanaraka amin'ny efijery finday. Ny fampiasana, ny fahazavana ary ny traikefa marika tsara hita amin'ny famolavolana mailaka finday mora raisina sy mandresy lahatra dia mamporisika ny mpanjifa hisoratra anarana ary hifanerasera tsy tapaka amin'ny programa mailaka an'ny marika.
Tags: mailakafamolavolana mailakamailaka findayfamolavolana mailaka findaymailaka mamalymailaka azo refesina
6 Nov 2013 tamin'ny 5:02 PM
Loharanom-pahalalana miavaka ho an'ny Hub fahalalana fahalalana mamorona. Zahao eto: http://goo.gl/7S6pye
10 Jun 2014 amin'ny 11:46 AM
Azo antoka fa betsaka ny olona very hevitra momba izay tsy ekena sy izay azo ekena rehefa mamaky ny lohahevitra amin'ny mailaka. Ny lakilen'ny mailaka azo refesina kokoa dia ny fanaovana azy ho matihanina bebe kokoa.